Akhriso:Hoggaamiye Mujaahid Waayeel Ah oo isagoo Sooman Ay Duqeyn Ku Dishay Dowladda Mareykanka.
Saturday October 08, 2016 - 11:03:28 in Wararka by Super Admin
Mu'asasada Al-Bunyaan oo ah garabka warbaahineed ee Jamaacada Jihaadiga Jabhadda Fatxu-Shaam ayaa baahisay kalimad maqal ah oo uu jeediyay Sheekh Abuu Cabdalla Al-Shaami.
Kalimaddan uu jeediyay Mas’uulka katirsan Fatxu Shaam ayaa taczi ku saabsan istish-haadka Sheekh Axmed Salaamah oo ku magac dheeraa Abuu Faraj Al-misri kaasi oo horraantii October 2016 ay diyaaradaha mareykanku ku duqeeyeen waqooyiga wadanka Suuriya.
Sheekh Axmed Salaama ayaa adduunka kaga tagay taariikh dahabi ah oo gabi ahaanteedba ku meeraysanaysa faafinta dacwada islaamka iyo ka qeyb qaadashada jihaadka caalamiga.
Abuu Cabdalla Al-Shaami wuxuu sheegay in Abuu Faraj Al Misri uu kala bar cimrigiisa ku qaatay Jihaad isagoo 25 sanadood ku xirnaa xabsiyada dowladda Masar, wuxuu kasoo dagaallamay Afghanistan,Suuriya iyo Masar isagoona socdaallo jihaadi ah ku tagay wadamo ay kamid yihiin Tajakistan iyo Ozbakestan.
Arrintan Cajiibka leh ayaa ah in Sheekh Axmed Salaama uu shahiiday maalin isniin ah isagoo sooman, markii gabalku dhici rabay daqiiqado ka hor intii aan la addimin salaadda Maqrib ayay mareykanku duqeyn ku dileen isaga oo aan wali Afurin.
Dadkii la noolaa sheikh Axmed Sallaama waxay sheegeen in uu ahaa caalim dadaal dheer ugu jiray sidii loo midaysan lahaa sufuufta jamaacaadka islaamiga mandiqadda Shaam.
Allaha u naxariistee sheekha oo shahiiday isagoo 60 sana jir ayaa isagoo sooman dhanka Rabbi u afuray waxaana loo rajeynayaa in uu Alle geliyo Janatul Firdows.
Taariikh Nololeedka Sheekh Axmed Salaamah
Sheekh Axmed Salaamah Mabruuk oo ku magac dheeraa Abuu Faraj Al Misri ayaa ku dhashay tuulada Al-mataaniya ee gobolka Al Jiizah wadanka Masar 8 December, 1956, sheekha ayaa waxbarashada dugsiga hoose,dhexe iyo sare ku qaatay isla tuulada uu ku dhashay.
Sanaddii 1979 ayuu ka qalin jebiyay kuliyadda beeraha ee Jaamacadda Magaalada Al-qaahira wuxuuna ahaa shakhsi si fiican u bartay cilmiga beeraha.
Sheekh Abuu Faraj wuxuu lahaa khibrad melleteri iyo hal abuur heer sare ah wuxuu kamid noqday jamaacaadkii jihaadiga ahaa ee Masar ka dhismay dhammaadkii todobaatameeyadii.
Sanaddii 1981-kii markii ladilay Anwar Saadaad madaxweynihii hore ee Masar ayaa xabsiga la dhigay isagoo sanado noloshiisa ku qaabtay jeelasha Masar ee lagu tacdiibiyo maxaabiista.
Sanaddii 1988 ayaa xabsiyada Masar lagasii daayay wuxuuna u baqoolay wadanka Afghanistan isaga iyo sheekh Dr Aymen Al Zawaahiri waxayna ka qeyb qaateen dagaalkii Afghanistan looga xureeyay midowgii Suufiyeeti.
Toban sanadood Kadib 18,April,1999 ayay maxkamad melleteri oo Masar kutaal waxay sheekh Abuu Faraj ku xukuntay xabsi daa'in kadib markii ciidanka Mareyaknka ee dalka Azarbijaan ay gacanta kusoo dhigeen sheekha oo xiligaasi ka yimid wadanka Albeeniya waxayna ugacan geliyeen xukuumadda Masar.
Kacdoonadii Masar ka dhacay kadib ayay sheekha usuurtagashay in uu ka baxo xabsiyada Masar wuxuuna u safray dhanka wadanka Suuriya isagoo ka qeyb galay dagaalka Suuriya ka socda wuxuuna ku biiray Jabhaddii la oran Jiray Jabhadda Alnusrah balse markii dambe isku bedeshay Fatxu shaam.
3,October 2016 maalin isniin ah ayay noloshiisa soo gaba gabowday sheekh Abuu Faraj Al Misri kadib markii diyaarad drone ah oo Mareykanku leeyahay ay ku duqeysay magaalada Jasru shuquur ee waqooyiga Suuriya.